traintip Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: traintip
နေအိမ် > traintip
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပတစ်ဦးရင်ခုန်စရာမြို့ထွက်ပြေးဖို့များအတွက်အကောင်းဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဒါဟာကြီးမားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သကျကျဉ်းမြောင်းချင်ပေလိမ့်မည်. ကံကောင်းစွာ, ဂျာမဏီနှင့် ပတ်သက်. ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ရွာ. သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူကိုမယူပါနှင့်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြန်းကျင်အရအများဆုံးဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပျော်စရာနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ခရီးထဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်စေစမတ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်. ကောင်းစွာစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းများနှင့်အောင်ကိုဦးတည်နေတဲ့ရှည်လျားသောလမ်းဝင်ဘာမှုအရာကိုမသိဘဲ…